Sidee looga saaraa astaanta astaanta sawirka Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Calaamadeynta waxaa loo isticmaalaa in lagu saxiixo sawirrada, waxay ilaalinaysaa xuquuqdaada daabacaadda, iyadoo laga hor istaagayo kuwa kale inay adeegsadaan iyaga oo aan lagaa helin oggolaansho. Laakiin waa run in mararka qaarkood aan badbaadinno sawirka leh calaamadda calaamadda oo aan lumino nooca asalka ah. Nasiib wanaag, Waxaa jira siyaabo looga saari karo calaamadeynta sawir leh Photoshop Sii wad aqrinta boostada si aad ubarato sida loo sameeyo talaabo talaabo!
1 Fur sawirka oo hel qalabka furaha dhejiska
2 Qalab koronto ah
3 Talooyin lagu hagaajinayo natiijooyinka marka astaanta astaanta laga saarayo sawirka
3.1 Duufaan si guul leh
3.2 Ku ciyaar cabirka burushka
3.3 Iska ilaali geesaha iyo laalaabka
Fur sawirka oo hel qalabka furaha dhejiska
Waxa ugu horeeya ee aan sameyn doono ayaa ah fur sawirka Photoshop Iyada oo calaamadeysan, waad ogtahay inaad ku furi karto adoo jiidaya. Marka xigta, khaanadda qalabka, waxaad kaheshaa baloogga (sawirka kore korkiisa waxaad ku calaamadeysay).
Qalab koronto ah
cunt qalabka furaha clone adiga ayaa ah kan u sheegaya Photoshop qayb ka mid ah sawirka aad rabto in lagu hagaajiyo "nuqul". Adoo riixaya fure doorasho, haddii aad la shaqeyso Mac, o hoose, haddii aad ku shaqeyso Windows, waanu dooran doonaa waa kuwee aagga sawirka aan u baahanahay inaan ku dhejino. Waxaan ku celin doonaa howshan, iyo waxaan rinjiyeyn doonaa astaanta biyo ilaa ay ka baaba'do
Talooyin lagu hagaajinayo natiijooyinka marka astaanta astaanta laga saarayo sawirka
Duufaan si guul leh
Si loo helo natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, waxaa muhiim ah inaad muujiso wax badan. Taasi waa, markaad dharbaaxeyso, waad qaadataa tixraacyo la mid ah sida ugu macquulsan xaga midabka iyo qaabka ilaa meesha aad rinjiyeynayso. Maaha isku mid in tan lagu sameeyo iyadoo laga soo qaadanayo qayb mugdi ah oo cirka ka mid ah, marka loo eego aagga u dhow astaanta-biyaha, oo leh cod la mid ah Tani waxay kaa dhigi doontaa mid adiga kuu macquul ah.
Ku ciyaar cabirka burushka
Xagga sare, Barta xulashada qalabka, waxaad beddeli kartaa qaabka, cabirka iyo nooca burushka, Sida caadiga ah waxaan doortaa wareegga faafin si marka loo daboolayo uu u jilicsan yahay. Laakiin waad beddeli kartaa.
Tirtiridda cirka qaybtiisu way fududahay, waxay qaadan doontaa waqti gaaban, maxaa yeelay waa aag aad u fidsan, oo aan faahfaahin badan lahayn. Weli, isku day inaad si qoto dheer u dhammaystirto oo aad si taxaddar leh u rinjiso si aysan u jirin googoyn iyo calaamado aan caadi ahayn Burush yar ayaa badanaa ka fiican.
Iska ilaali geesaha iyo laalaabka
Way adkaan doontaa in la hagaajiyo aagga geesaha ama tusaale ahaan meelaha ay dharka ku leeyihiin laalaab ama laablaabasho. Taladaydu waa aad u ballaar, wax badan, iyo yareynta cabirka burushka, si taxaddar leh, u dabool. Xitaa pixel waad ku aadi kartaa pixel. Waa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah laakiin natiijada ayaa ka fiicnaan doonta haddii aad ku sameysid burush qaro weyn iyo meel fog. Waxaa habboon in waqti lagu qaato.
Tani waxay noqon laheyd natiijada ugu dambeysa. Hadaad rabto inaad waxbarto ku abuuri sumad-kuu-gaar ah Adobe Photoshop Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso qoraalka aan kaaga tagayo adiga oo isku xiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida looga saaro astaan-biyoodka sawirka Photoshop
Sida loo jajabinayo qaybo ka mid ah sawirka Adobe Photoshop